कथा : देहत्याग
'दीपक? उठ छोरा । आज मातातिर्थ औंशी, छोराछोरीले आफ्नो आमालाई पूजा गर्ने, मिठो ख्वाउने दिन । तँ पनि तेरो हातले आमालाई केहि खुवाईदे । बैनिले अगि नै उठेर सबैथोक गरिसकि । ऐले तेरो क्याम्पस जानेबेला हुन्छ । म पनि अफिस जानुपर्छ । तँ आउँदा फेरी बैनि स्कूल जान्छे ।' आज बिहानै ओच्छ्यानमै आएर बाबाले मलाई धर्म सङ्कटमा पार्दै उठाउनुभयो । बाबाको कुरा नसुनुँ भने पनि कसरी । सुनुँभने पनि कसरी । सौतेनी आमालाई के के खुवाउनु रे ? सौतेनी आमालाई पूजा गर्नु रे ।
बाबाले मेरी आमा बित्नुभएपछि हाम्रै हेरचाहको बहाना पारेर बिहे गर्नुभएको थियो । मलाई त बाबाले बिहे नगरेकै भए ठिक हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । तर मैले केहि भनिँन । मलाई त्यसैपनि मानसिक रोगी ठान्नुहुन्थ्यो बाबाले । मैले भनेर पनि त केहि हुन्थेन । बाबाले हाम्रो हेरचाहलाई बहाना बनाएर आफ्नैलागि बिहे गर्नुभएको पनि त हुन सक्छ । नत्र बिहे गर्नै के खाँचो थियो होला र ? म हुर्किसकेको छु । बैनि हुर्किसकेकि छे । भान्साको काम गर्ने त मान्छे राख्दा पनि हुन्थ्यो ।
उठेर ब्रसमा मञ्जन हालेर बाहिर निस्किएँ र आँगनको यौटा कुनामा टोलाएर ब्रस गर्न थालेँ । मनभित्र भने आँधी उर्लिरहेकै थियो । म भित्र सायद धेरै नै पूर्वाग्रह भरिएको थियो त्यसैले म बैनिले जस्तै सौतेनी आमासँग रत्तिन सकेको थिईनं । सुरुमा बैनीले पनि बाबाले यो बिहे गर्नुलाई सहज रुपमा लिन सकेकि थिईन । उ भन्थी, 'दादा, बाबाले किन बिहे गर्नुभएको होला नि? हामी यत्रा ठुला ठुला भैसक्यौं । सबैले जिस्क्याउँछन् हामीलाई बाबाले बिहे गर्नुभयो भन्ने सुनेर । सानीआमाले हामीलाई हेला गरिन् भने झन के होला ?' त्यसबेला बैनिलाई पनि बाबाले बिहे नगरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो तर पछि उ सानीआमासँग राम्रै रत्तिई । बोलाउँदा पनि उ सानीआमालाई आमा भनेरै बोलाउँछे । सबैले दिदीबैनि जस्तै मिलेका आमाछोरी भन्छन् । गाउँभरी कसैले पनि सानीआमालाई नराम्रो भनेका छैनन् । आफ्ना पट्टी सन्तान हुँदैनन् भन्ने जानेर पनि बिहे गर्ने हिम्मत भएकि बहादुर आइमाई भन्छन् सानीआमालाई । तर मैले भने कैलेपनि सानीआमालाई सकारात्मक लिन सकिंन । आमा भनेर बोलाउँन समेत सकिंन । एकपल्ट मैले बोलाउँदा सानीआमा भनेको सुनेर बाबाले भन्नुभएथ्यो, 'के को सानी र ठुली गरिरहनुपर्यो? थपक्क आमा भने भै'गो नि ।'
बाबालाई मैले कहिल्यै मुख फर्काएको थिएन त्यो दिन पनि केहि भनिंन बरु त्यो दिनदेखि मैले सानी न ठुली आमा नै भन्न छाडें । सकेसम्म त म सानीआमासँग बोल्दै बोल्दिंन । बोल्नै परेपनि बिना सम्बोधन नै बोल्न थालें ।
'दादा छिट्टो गर्नुस् न ।' मलाई पर्खिरहेकि बैनी नेपथ्यबाट बोली ।
'कस्तो अटेरी गरेको यो खुस्केटले? अरुबेला मन नपरे पनि आज त आईदिनु नि?' नेपथ्यबाटै बाबाले भन्नु भएको पनि सुनें । म बोल्दैनबोली सानीआमा प्रति जति बैर राख्थें । बाबाले त्यो स्पस्ट पारिदिनुहुन्थ्यो । कैलेकाँहि मलाई बालाले त्यसरी मेरो मनभित्रको कुरा प्रस्ट्याईदिँदा रीस उठ्थ्यो, कैलेकाँहि भने ठिक लाग्थ्यो । भन्न चाहेर पनि भन्न नसकेको कुरा बाबाले भनिदिएझैं लाग्थ्यो । मैले आशा राखे अनुशार बाबाले मलाई कहिल्यै तँ पागल छैनस् भनेर हौसला दिनुभएन बरु सानो सानो कुरामा मलाई बाबाले नै अर्धपागल, खुस्केट भन्दा भने मन साह्रै पिरो हुन्थ्यो ।
म मुखमै ब्रस कोचेर बैठकमा पुगेछु । ढोकामा पुग्दा सबैका आँखाहरुले मलाई नै ताकिरहेका थिए । तीनैजोडा आँखाहरु मेरो प्रतिक्षामा थिए सायद । मैले एक एक सर्को तीनै जोडा आँखाहरुमा आँखा जुधाएँ । बाबाको आँखामा म प्रति केहि क्रोध, केहि घृणा र केहि सहानुभुति जस्तै मिश्रित भाव देखें । वहाँले भन्नुभयो, 'यतिञ्जेलसम्म मुख पनि धोएको रहेनछ । कस्तो पागल केटा हो यो?' म चसक्कै दुखेँ तर म मुख धुन गएको मुखै नधोई त्यहाँ आएछु । थपक्कै फर्किएँ म मुख धुनलाई ।
फेरी आउँदा याद गरें बैनिको मुहार नै उज्यालो थियो । उसको प्रसन्नता आँखाहरुले झनै देखाईरहेका थिए । सानीआमाको आँखाहरु भने भावशुन्य झैं लागे । न खुसी न पीडा । सानीआमाका आँखाभरी आँसु डबडबाईरहेका थिए ।
सानीआमाको आँसु भरिएका आँखा मैले कहिले देखेको थिईंन । जहिल्यै पनि सुख्खा लाग्थे मलाई उनका आँखा तर आज आँसु देख्दा उनको आँखामा मलाई आफ्नै आमाको प्रतिमुर्ति देखेझैं लाग्यो । मेरी आमालाई कमलो मन भएकि साहसी आइमाई भन्थे सबैले । सानो सानो कुराले रुवाउँथ्यो मेरी आमालाई । अत्यन्तै भावुक हुनुहुन्थ्यो । सँधै अर्काको लागी बाँचु, अरुलाई दिउँ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो । 'आफु मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ' भन्ने कविता लेख्ने देवकोटाको मन र मेरी आमाको मन उस्तै थियोहोला जस्तै लाग्थ्यो मलाई । सानीमाको आँखाबाट पोखिनै लागेको आँसुले मेरो मनलाई केहि पगालेजस्तै लाग्यो । आमाको सम्झनाले हो या सानीआमाको आँसुले हो मैले छुट्याउन सकिंन तर पग्लिएर मेरो मनको आँसु मनकै आँगनमा सलल बगेझैं लाग्यो । मलाई त्याँहा सामना गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलापहरु निमेषमै सकेर त्याँहाबाट बाहिरिने ईच्छा भयो ।
बैनिले सबैथोक तयार पारिसकेकि थिई । बैनि र मैले एकैचोटी सानीआमालाई मिठाई र अन्य परिकारहरु खुवाउन थाल्यौं । सानीआमा भित्रैबाट भक्कानिएको बुझ्न गाह्रो थिएन । वहाँका आँखाबाट बरर आँसु खसे । सानीआमाको आँखाको आँसु झरेर बैनिको नारीमा पर्यो । मेरोमा परेन । सायद आँसुले पनि थाहा पायो होला मैले यो घरमा सानीआमाको आगमनलाई सहज लिएको छैन भन्ने । बैनि सानीआमाको आँसु पुछिदिँदै भन्दैथिई, 'अरे किन रुनुभएको, नरुनु न आमा ।'
म त्याँहाबाट उम्किन चाहन्थें । फर्किएर ढोकातिर लम्केको के थिएँ । बाबाले कपडाको यौटा सानो प्याकेट दिँदै भन्नुभयो, 'ल यो पनि दे आमालाई ।' बातबातमा मलाई पागल भन्ने बाबाको सामु त मलाई उभिनै मन हुन्थेन । मैले बाबाको हातबाट प्याकेट लिएँ, सारी थियो त्यो सायद, र सानीआमाको काखमा पर्नेगरि हुर्याएर बाहिर निस्किएँ ।
'के गर्छ यो बौलाहा?' बाबाको रीस ममाथी पोखियो ।
'मैले छोरालाई कहिल्यै आफ्नो बनाउन सकिंन ' सानीआमाले भक्कानिँदै भन्नुभएको सुनें । मलाई औडाहा छुट्यो । क्वाँ क्वाँ रोईदिउँ जस्तो पनि लाग्यो । 'आफ्नी आमाले त पराई बनाएर छोडेर जानुभयो अब सानीआमाले आफ्नो बनाएपनि के नबनाए पनि के?' यस्तै सोच्दै म आफ्नो कोठामा पसें र तयार भएर क्याम्पस जान निस्किएँ ।
साईकल झिक्दै गर्दा बैनिले भनि ,'दादा खाजा खानु न । तयार छ । आमाले खाजाखान बोला भन्नुभएको छ ।'
पहिल्यैदेखि मनले आज म सानीआमाले बनाएको खाजासाजा खान्न भन्ने सोचेको थियो । मैले त्यसैगरी भनें, 'भरै छिट्टै आएर तँसँगै खान्छु । आज म सानीआमाले बनाएको खान्न । तँ बना है ।' बैनिको पछिल्तिर सानीआमा उभिएकि थिइन् । उनलाई देखेपछि जोडले पाईडल मारेर म गेटबाहिर हुत्तिएँ ।
'मैले किन त्यसो भनेँ ? म किन ब्यर्थै सानीआमालाई दुखाउँछु? मलाई पागल किन भन्छन् सबैले?
म सबै कुरा सोच्न सक्छु । पागल त म नहुनु पर्ने । तर म किन केहि काम ठिकसँग गर्न सक्दिंन? कि म साँच्चै पागल नै हुँ?' मनभित्र आँधी बोकेरै म बेगले साईकल हुईँक्याउँदैथिएं । बाटोमा महेश भेटें । उ साईकलको चेन चढाउँदैथियो । मलाई देखेर बोल्यो, 'हैरान पार्यो यार यो थोत्रे साईकलले पनि ।'
'नयाँ साईकल किन्ने भनेको हैन अनि?' मैले सोधें ।
'हो यार, तर किनिन फेरि ।' हामी समानान्तर गुडिरहयौं साइकलमा ।
'हेर्न, आज आमातिर्थ औंसी रे । हामी आमा नहुनेलाई त केहि न केहि हुँदोरहेछ ।' महेशले फेरी उहि विषयमा घुसार्यो मलाई जहाँबाट म निस्कन चाहन्थें । उसले आमातिर्थ भन्दोरहेछ । म मातातिर्थ भन्थें । सुन्दा अलि अनौठो लागेपनि उसले भनेको नै अझ नजिकबाट भनेको जस्तो लाग्यो मलाई । उ भन्दैथियो, 'तै तिम्रो त सौतेनी भए नि आमा त हुनुहुन्छ घरमा । मलाई त आज साह्रै न्यास्रो लागेको छ यार । के गर्नु, मरेकि आमालाई आज भेट्न पाईने भनेभए म त मरेरै भएपनि जानेथिएँ बरु ।' आमा नहुनुको पीडा उसले यस्तरी ओकल्यो कि म झन रन्थनिएँ । बाटोभरी महेशले आफ्नो मनको तितो सुनाईरहयो मलाई । यत्तिका मनका कुरा सुनाउने उसले मलाई पागल सम्झिंदैनरहेछ भन्ने सोच्दै पनि थिएँ म । क्याम्पस पुग्ने बेलामा उसले भन्यो, 'साँची आजभोली तिमीलाई ठिक भएजस्तो लाग्यो । औषधी खाँदैछौ होला नि? तिमीलाई आफुलाई त बौलाको छु जस्तो लाग्दैन होला नि?' मेरो हरेक विश्वास यसरी नै त क्षणमै ढलेर जान्थ्यो । यो पनि कुन नौलो कुरा भयो र ? क्याम्पसमा पहिले निक्कै साथीहरु थिए मेरा तर मलाई पागल भनिन थालेपछि साथीहरु सबै टाढा भए । म एक्लै हिंड्छु ।
जैलेदेखि म पागल भनिन थालेँ तैलेदेखि म भित्र बनेको बिश्वासले मलाई कहिल्यै काम दिएन । म आफुलाई ठिक छु भन्थेँ तर कैलेकाँहि के के गर्छु रे जो म थाहा पौँदिन । त्यसकै भरमा मलाई धामीझाँक्री, डाक्टर, बैद्य ईत्यादि गरिन थालियो र म झन पागलमा दरिँदै गएँ । म थाहा पाउँदिन तर भन्छन् म सानो बच्चा देख्ने बित्तिकै बच्चालाई बोकेर दगुर्छु रे 'आमा मैले निकालें बच्चा, आउनु बाहिर आउनु । मैले बच्चा निकालिसकेँ' भन्दै ।
'आत्महत्या गर्नलाई ठुलो कुरै चाहिँदैन मान्छेलाई । अनावश्यक कुराहरुलाई नै ठुलो बानाएर पनि मान्छेहरु आत्महत्या गर्छन्.........' यस्तै यस्तै भट्याईरहेथे उनि । मानसिक रोगीको बारेमा पनि उनि केहि भन्दैथिए, 'मानसिक रोगीहरु सँधै खुल्ला रहने सयौं विकल्पहरु देख्न असमर्थ हुन्छन् र आत्महत्या मात्र यौटा विकल्प देख्छन् ।'
मानसिक रोगीको कुरा उठ्दा मलाई मानसिक रोगी ठानेर सबैले हेरेको झैं लाग्यो । वरीपरि फर्किफर्कि हेरेँ । सबैका आँखाहरु मलाई नै मानसिक रोगी भन्दै ताकिरहेका थिए । कक्षाबाट बाहिरिँदा मलाई आफु मानसिक रोगी होईन भन्ने कुरामा बिश्वास थियो तर अर्को कक्षामा पनि मानसिक रोगीहरु र आत्महत्याको कुराले नै मेरो मनमा छटपटि बढिरहयो ।
बाँकी कक्षाहरु नपढि म क्याम्पसबाट पनि बाहिरिएँ । ठेगानले म केहि सोच्न सकिरहेको थिईंन । सोचाईका अनेकौं टुक्रे उतारचढावले मलाई भित्र भित्र हल्लाईरहेको थियो । म अनियन्त्रित थिएँ । घर आईपुगेछु । सरासर आफ्नो कोठामा पसेँ । टेबलमा मेरो यौटा कपि खुल्ला देखें । बैनिले लेखेकि रहिछ, 'दादा, मेरो एक्स्ट्रा क्लासको लागी म छिट्टै निस्किएँ । तपाईं खाना खानु ल? आज सबै मैले पकाएकि हुँ । आमाले केहि पकाउनुभएन । आमा आज धेरै रुनुभयो । आज आमा रुँदा मलाई आफ्नै आमा रोए जस्तै लाग्यो । तपाईंले पनि अब आमालाई आफ्नै आमालाई जस्तै सम्झिदिनु है । तपाईंलाई पनि आमाले धेरै माया गर्नुहुन्छ । आमाले तपाईंलाई पागल होइन भन्नुहुन्छ । तपाईंलाई आमाको धेरै माया लागेर त्यस्तो भएको रे...........'
बैनिले लेखेको कुराले म भित्रभित्रै रोएँ । उठेर बैनिको कोठामा पुगेछु । ढोकामा ताला लगाएकि थिई । बाहिर उसको कुर्थासुरुवाल र सल धोएर सुकाएको थियो । तिनै सुम्सुम्याएर म आफ्नो कोठामा फर्कें ।
'म किन रोईरहेछु?' आफैंलाई सोधें । सानीआमासँग नरत्तिएकोले हैन । आफ्नै आमाको सम्झनाले म रोएको हुँ जस्तो लाग्यो मलाई । मेरी आमा बित्नुभएको त्यो दिन सम्झें मैले । म यहि कोठामा बसेर परिक्षाको तयारी गर्दैथिएँ । आमा बैनिलाई लिएर अर्को गाउँको पुराणमा जानुभएको थियो । दिउँसो तीनबजे खबर आयो आमा त्यहि पुराण लगाएको घरसँगै जलेर खरानी हुनुभयो । म त्याँहा पुग्दा बैनि मुर्छा परेकि थिई । आमा हुनुहुन्थेन । बाबा पनि अफिसबाटै पुग्नुभएको थियो तर बौलाहाले जस्तै जे पायो त्यहि भन्दैहुनुहुन्थ्यो । बाबालाई त्यसरी बिक्षिप्त अवस्थामा देखेर होला मलाई म दह्रो हुनुपर्छ जस्तो लागेको थियो । त्यसदिन पनि नरोएको म त्यसदिन देखि कहिल्यै रुन सकिँन ।
आँगनमा पुराण समापनको कार्य भैरहँदा सेलरोटी पकाउँदै गरेको आगोले घर सल्किन सुरु गरेछ । आगो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गैसकेको बेला सबै भागेर लाखापाखा लागेछन् । त्यस्तैमा, कोठामा कोहि छिमेकीको सानो बच्चा सुताईरहेको थाहा भएछ । बच्चालाई निकाल्न आमा कुदेर घरभित्र पस्नुभएछ र निस्कन नसकि बच्चासँगै भित्रै जल्नु भएछ । सम्झिँदा अहिले पनि जिरिङ्ग हुन्छ मेरो मन र आमाको त्यो साहसलाई सलाम गर्न मनलाग्छ । त्यसदिन देखि रुन बिर्षेको मेरो आँखा आज बिहानै देखि चुहिन खोज्दैथिए ।
यस्तोबेलामा मन खोलेर बातगर्ने मेरी साथी बैनिमात्र थिई । उसँग धेरै कुरा गर्ने ईच्छा भयो मलाई । तर उ स्कूल गैसकेकि थिई । म फेरी बाहिर निस्किएँ र सुकाईरहेको बैनिको सल झिकेर कोठामै पसेँ ।
मैले मर्नुहुँदैन भन्ने विचार उठ्यो । म मरें यदि भने बैनिलाई के हुँदो हो ? बाबाले के सोच्नुहुँदो हो? अनेक तर्कना खेल्न थाले मनमा । यदि म मरें भने भोली ककस्लाई के फरक पर्छ भन्ने कुरा धेरै सोचें । मलाई बैनिको भन्दा पर्तिर कसैको माया लागेन । बैनि केहि दिन दुखि होलि तर उसले सजिलै बिर्षिन्छे मलाई । सानीआमासँग राम्रै झ्याम्मिएकि छे उ । बाबालाई त केहि फरक नपर्ला उनको साथी सानीआमा छँदैछन् । सानीआमासँग मलाई सरोकार नै छैन । म आफैं प्रति कठोर बन्दै गएँ ।
'आत्महत्या गर्नेलाई ठुलो कारण किन चाहिन्छ र? उनिहरु त्यसै मरिदिँदा होलान् । आफ्नो पटक्कै माया नलागेपछि उनिहरुलाई अरुको मायाले के थाम्न सक्थ्यो?' यस्तै यस्तै कुराले मेरो दिमाग उम्लिरहन थाल्यो । मैले आत्महत्या गर्ने एक प्रकार निश्चय गरेँ । 'म मर्न त सक्छु तर मर्दा मर्दै मलाई बचाउन कोहि आएभने के होला?' भन्नेतिर मेरो ध्यान गयो ।
कोठाबाट बाहिर निस्केर घरमा चालचुल सुनें । चकमन्न छ । कोहि छैनन् घरमा । बैनि स्कूल गएकि छ । बाबा अफिस जानुभएको छ । सानीआमा घरमा हुनुहुन्न । परिवेश उपयुक्त देखेर म फेरी कोठामा पसें । दिमागमा आज मर्न पाएँ भने म आमालाई भेट्छु भन्ने निश्चय बनेको थियो । त्यसमाथि लाग्यो अझ बैनिको सलमा झुण्डिएर मरें भने आमालाई बैनिको खबर समेत थाहा हुनेछ । सायद त्यसैको लागी मैले अगि बैनिको सल बोकेर आएको हुँ भन्ने पनि लाग्यो । मैले बैनिको सललाई घाँटीमा सुर्काउने गाँठो पारेर बाँधे ।
मलाई थाहै थिएन आत्महत्या गर्दा पहिले घाँटिमा बाँधिन्छ कि झुण्डिने ठाउँमा? पहिले घाँटिमा बाँधेर झुण्डिने ठाउँमा बाँध्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ । मैले घाँटीबाट सुर्काउने गाँठो खुकुलो पारेर सल झिकेँ र कोठाको कोरामा कुर्शी राखेर अर्को छेउ बाँधे ।
त्यसपछि सम्झिएँ । म मरिसकेपछि मेरो आत्महत्यालाई हत्या भनेर घरमा अरुलाई प्रहरीले दुख देला । त्यसैले बैनिले नोट लेखेको कपिमा लेख्न थालेँ, 'म आज आमालाई भेट्न जाँदैछु । यो मेरो विश्वाश हो कि आज मरें भने म आमालाई भेट्नेछु र आमासँगै बस्नेछु । मेरो मृत्युमा कसैलाई दोष नदिईयोस् । यो आत्महत्या होईन, देहत्याग हो । राजीखुशीले म मेरो देहत्याग गर्दैछु । मलाई पागल भन्नेहरुलाई मेरो केहि भन्नु छैन । तर म पागल कहिल्यै थिईंन । मैले सकेसम्म सामान्य क्रियाकलाप गर्दापनि सबैलाई त्यो पागलले गर्ने असामान्य क्रियाकलाप जस्तो लाग्थ्यो भने त्यसमा मेरो केहि भन्नु थिएन र कसैसँग गुनासो पनि छैन । तर आईन्दा समाजले कसैको पनि मर्म नबुझि कसैलाई पनि पागल नभनिदेवोस........' मैले नोटमा धेरै लेख्न सकिँन । लेख्नु आवश्यक पनि थिएन । पागल भनेर चिनिएर बाँच्नु भन्दा मर्दा नै मैले शान्ति पाउँछु भन्ने पनि मलाई विश्वास थियो ।
म उठेँ र कुर्शीमाथी चढेँ । अब मलाई आफु जीवन र मृत्युको धेरै नै मसिनो रेखामा उभिएको छु भन्ने बोध भयो । मनमनै फेरी दोहोर्याएँ, 'पागल नभै मलाई पागल भन्ने यो दुनियाँमा कस्को निमित्त मैले बाँच्नु छ? किन बाँच्नु छ? जे जति थिई यौटी बैनि थिई उसले मलाई माफ दिओस् । म आमालाई भेट्न जान्छु । एक जान्छु, दुई जान्छु, तीन जान्छु....'अठोट बन्यो मनमा । अनौठो शक्तिले मलाई सलको पासोमा टाउको छिराउन अह्राउँदैथियो । म आफ्नो वरिपरी घना अन्धकारको कल्पना गर्दैथिएँ ।
२०५२/५३ तिर आगलागीमा परेको बच्चा निकाल्ने साहस बोकेर जलिरहेको घरभित्र पसि त्यहिँ जलेर खरानी हुनुभएको ती साहसि आमा र वहाँकै बियोगपछि विक्षिप्त बनेका छोरा, मेरो साथी दीपक बिष्ट, जस्ले २०५४ सालको मातातिर्थ औंशीका दिन आत्मदाह गर्नुभएको थियो, प्रति वहाँहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै २०५४ साल जेष्ठमा लेखिएको कथा । मुख्य कथा वास्तविक भएपनि सम्बादहरु र देखाईएका घटनाक्रमहरुलाई मैले काल्पनिक रंगले पोतेको छु ।
कथा : रोगी घाम
कत्रो मुर्खता! कत्ति न बिधी माया गर्छे मलाई भनेर मख्ख परेको रहेछु म । आज सम्झन्छु, कता कता सपनामा पो भेट भएको थियो कि अथवा कथामा पो पढेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ । साँच्चै मान्छे त मैले माया पाएको छु भन्ने भ्रम पालेर पो बाँच्दो रहेछ । अझ मैले माया गरेको छु भन्ने भ्रम फैलाउन त झन खप्पिस हुँदो रहेछ ।
आज बुझ्दा मान्छेले माया पाएको अनि माया दिएको त मैले कहिँ पनि देखिंन, आफ्नै जिन्दगीमा पनि ।
एकदिन, एकझर दर्के पानी परेर आकाश सफा भएको थियो । साँझको बेला पहेँलो घाम टिलिली लागेर रमाईलो पारेको वातावरणमा असारे फूलको फूलैसँग लत्रेको हाँगो सम्हालेर तह लाउँदैथिई उ । उसको खुट्टाभरी माथी पिँडौलादेखि नै पहिले पानीले निथ्रुक्क भिजेका असारे फूलहरु पोखिएका थिए अनि त्यसमाथी पहेँलो घाम पोतिएको थियो । मैले उसको खुट्टाहरुमा मन लठ्ठै पार्ने तर मेसो नबुझिने कुनै अमुर्त चित्रकारी देखें र ट्याप्पै समातेर चुमिदिएं उसको खुट्टा । उ छक्क परेर मलाई हेर्न थाली । वाक्यमा उसले चुँ! सम्म उच्चारण गर्न सकिन तर आँखाले मसँग यतिविघ्न बातमारे जस्तो गरी कि, केके भनी केके; मैले परि लाउंनै सकिंन । अनि मैले नै भनिदिएँ, 'तेरो यो घिनलाग्दो खुट्टाभरी यसरी नै फूलहरु सजिईरहुन् अनि म सँधैं चुम्न पाईरहुँ ।'
उ अझै अवाक् उभिएर मलाई हेरिरहेकि थिई । उसको मुहारभरी पनि पहेँलो घाम छताछुल्लपोतिएको थियो र उसलाई सुवर्णको प्रतिमाझैं टलक्क पारेको थियो । न उसका आँखाका पुतलीहरु नै चले, न उ नै चल्मलाई । यहाँसम्म कि ठिक त्यतिबेला उसको कपालको यौटा केशसम्म पनि हल्लाईदिन त्यहाँ बतास धरी आईदिएन ।
त्यसबेलासम्म उसले मलाई कम से कम मुस्कानले स्वागत गर्नुपर्थ्यो । तर अहँ, उ त प्रस्तर मुर्तिझैं ठिङ्ग उभिई मात्र । मान्छेहरुलाई कसरी जङ्ग चल्छ कुन्नि मलाई भने त्यसबेलासम्म जङ्ग चलिसकेको थियो । यो आदत मलाई सँधैभरी बिझाईरहन्छ । यस्तोबेलामा म केहि न केहि बिगार गरिहाल्छु । मैले नजिकै भएको गमलालाई कस्सेर लात्तले हानिदिएँ । उ नराम्रो गरी झस्की । उसको मुहारमा यौटा गमला फुटेर जानुको पीडा भरिएर आयो र पोखिएर गयो पनि । रुन्चे आँखाले मलाई हेरेर उसले बल्ल भनि, ' नाईँ के, तपाईं त जहिले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ ।'
उ गमलानेर आई । फुटेर छरिएको गमलालाई छोई र उठेर भनि,' धन्न! यस्मा भएको फूल अर्को गमलामा पनि छ ।'
यसो भनेर उ मैले गरेको गल्तिलाई गल्ति नै हैन भने झैं पार्न खोजिरहेकि थिई । मलाई थाहा थियो जति चित्त दुखेपनि उ मेरो गल्ति प्रति चित्त नदुखेजस्तो ब्यावहार गर्थी । उ मेरो छेवैमा आई र काननेर मधुरो बोली, 'चिसो पानी ल्याईदिउँ?'
म राम्रै सेलाईसकेको थिएँ । मलाई लाज लागीसकेको थियो । भर्खरै गरेको उपध्रो पचाउने बहानामा मैले थेतरिँदै भनें, 'अहँ मलाई त मोई चाहिन्छ ।'
'मोई?' झट्ट म तिर नजर फर्काएर सोधी उसले ।
मैले चोर औंलाले उसको दुबै ओठहरुलाई छोएर त्यहि औंला चुम्दै भनें, 'अँ मोई ।'
उसले मेरो अघिल्लो चाल बुझि सायद स-साना फूलिरहेका तिउरी फूलहरु फट्किएर नाघ्दै फूलबारीको पल्लो छेउमा पुगेर भनि, 'मोई त भा'पो । आज पारेकै थे'न ।'
यसरी बित्थे हाम्रा रमाईला दिनहरु । कैले नदि जस्तै सलल बग्थ्यो त कैले बगर जस्तै स्थिर पनि रहन्थ्यो । म आफ्नै मनको क्यानभासमा कल्पनाको कुचि चलाएर बिभिन्न रंगहरुले आफ्नै भविश्यको चित्र कोरिबस्थें । साँच्चै पनि चित्रहरु कोर्दा म आफ्नै भविश्यको दिनहरुको कथा कोर्न खोज्थें । चित्रमा म आफुलाई मनपर्ने पँहेलो रंगलाई सकेसम्म सामेल गराउन खोज्थें र त्यसले जहिले पनि मेरो भविश्यको चित्रलाई रोगी बनाईदिएझैं लाग्थ्यो ।
अर्कोदिन म आफुले बनाएको यौटा चित्र लिएर उसलाई देखाउन गएँ । चित्रमा सानो यौटा पराले झुपडी, आँगनको कुनामा यौटी नारी भाँडा माझीरहेकि, उसका वरिपरी तीनवटा भाल्टाङ भुल्टुङ कोहि खेल्दै गरेका, कोहि रुँदै गरेका र आँगनको अर्को छेउमा यौटा पुरुष भैंसीको पाडो तान्दै गरेको देखिन्थ्यो । पक्का नेपाली गाउँको कुनै घर परिवारको सजीव चित्रण गर्ने सक्दो मेहनत गरेको त्यो चित्र उसलाई देखाउँदै मैले भनेको थिएँ, 'ल हेर हाम्रो भविश्यको चित्र ।'
मेरो चित्र हेरेर उसले हाँस्दै प्रश्न गरेकि थिई, 'बस् यस्तै? के हामी यो भन्दा माथी जाँदैनौ?'
प्रत्युत्तरमा मैले भनेको थिएँ। 'यो वातावरणको सुख हेर न, यहाँ भन्दा माथी गएपछि यो सुख कहाँ रहन्छ?'
'लु भयो यस्तो संसार तपाईंको कल्पनामा मात्र हुन्छ मेरो कल्पनामा यो भन्दा अर्कै हुन्छ ।' त्यसदिन उसको फुर्सद नभएर वहस अगाडी बढेन । तर उसको कल्पनामा सँधै भौतिक सुबिधाले सम्पन्न भविश्यको चित्र हुन्थ्यो भने मेरो कल्पनाले सँधै सुबिधालाई भन्दा सुखलाई जोड दिन्थ्यो । भौतिक सुबिधा प्राप्त गर्नु नै सुख हो भन्ने उसको गलत धारणालाई मैले सच्याउन बाँकी थियो । त्यो बाँकि नै रहयो ।
मलाई दिनहुँ उसँग नभेटि हुदैनथियो । प्रायजसो म साँझतिर नै उसलाई भेट्न जान्थें । खाडीको पिपलको रुख, गाउँ नजिकैको चउर र खोला किनारको समिको फेद ईत्यादि हाम्रा खास खास ठाउँहरु थिए साँझमा टहल्ने । उमेरले म भन्दा केहि सानी उ शारिरिक बनावटले अझै सानी थिई । उसको कोमल मन र छरितो सानो शरिरमा प्रसस्तै संयम र साहस थियो ।
एकोहोरो सान्निध्यताले हाम्रो माया साँच्चै हो को भ्रम सम्म आईपुगेछ । अहिले हेर्दा त्यो भ्रम रहेछ भन्ने ज्ञान छ म भित्र तर उ बेला मेरो लागी पनि यथार्थ थियो । त्यहि भ्रमले हामीलाई एकाकार बनायो । भ्रमले नै हामी माझ समझदारी र सामाञ्जस्यता स्थापना गरायो । तब हामीले केहि कुरामा टाउको दुखाईरहनु पर्ने भएन र केहि कुरामा नदुखेको टाउको पनि दुखाउनु पर्ने भयो । हामीले आ-आफ्नो मनबाट आपसमा नमिलेका केहि रहरहरु च्यातेर मिल्कायौं अनि आपसमा मिलेका थप केहि रहरहरु सजायौं ।
हामी क्रमश दुबैलाई मनपर्ने रंगहरु घोलेर भविश्यको साझा चित्र तन्मयताका साथ कोर्न थाल्यौं ।
अर्को एकदिन, साँझकै बेला उ आँगनमा बसेर सब्जीको लागी फर्सीको मुन्टा केलाउँदैथिई । मैले देखेँ उसको सारा शरिरलाई पँहेलो घामले अँगालो हालेको थियो । पँहेलो म्याक्सी भित्रबाट निस्किएको उसको खिरिलो पाखुरा, दुब्लाएको जस्तै देखिने उसको अनुहार, अलिकति देखिएको उसको छातिको माथिल्लो भागको हाड सबैमा पँहेलो घाम पोतिएर उसलाई रोगी जस्तै देखेँ मैले ।
दृष्टि फेर्नलाई मैले आँगन वरिपरी नजर दौडाएँ । रबरको विरुवा, अशोकको सुरिलो बोट, घण्टी फूलको बुट्टा, आँगनवरिपरी फुलिरहेका अरु साना फूलहरु सबैकुराहरु एकनाससँग पँहेलो घामले लिपिएका थिए र सबै सबै नै रोगी देखिएका थिए । मैले फेरी उसलाई हेरेँ । उ झनै रोगी देखिई ।
एकाएक मलाई त्यो बातावरणको पँहेलोपना बिझाउन थाल्यो । बिझाउनु मात्र हैन सबै सबै पँहेलो देखेर मलाई बान्ता हुन लागेझैं भाउन्न छुट्यो । मेरो मुखबाट अचानक निस्किएछ, 'छि! आज कस्तो रोगी घाम लागेको ।'
'किन नि, तपाईंलाई त यस्तै पँहेलो घाम मनपर्थ्यो त?' आश्चर्यमा परेर उसले भनी ।
'हो हुनत, तर खै किन आज सबै कुरा यो पँहेलो घामले रोगी देख्दैछु । तँलाई पनि ।' मैले मनमनै भनेँ, 'बरु तँ भित्रै बसेर तरकारी केला न ।'
प्रकटमा म केहिपनि बोलिँन । उ त्यहि रोगी घाममा बसेर फर्सीको मुन्टा केलाउन तल्लिन थिई । म भने पुरै वातावरणलाई र उसलाई झनझन रोगी देख्दैथिएँ ।
निक्कै लामो तिथीमिती पचाईसक्यो समयले । आज समय लगायत धेरै कुराहरुले मलाई पछि छोडेको छ । मेरी उसले पनि मलाई छोडेर गैसकी तर यो रोगी घामले भने मलाई अझै छोडेको छैन । अझैसम्म लखेटिरहेको छ यो रोगी घामले मलाई ।
म भागीरहेँ यो रोगीघाम देखि । अझै भागीरहेकै रहेछु । आज सोच्दैछु म किन ब्यर्थै तर्सेर भागीरहेछु यो पँहेलो रोगी घामदेखि ? म नभागे के हुन्छ? पहिले पहिले मलाई साँझको पँहेलो घाम साह्रै प्रिय लाग्थ्यो । एक्कासी किन म पँहेलो घामलाई रोगी देख्न थालेँ ? के भ्रम हो यि दुईवटामा ? पहिले पहिले पँहेलो घाम प्रिय लाग्नु भ्रम हो कि? पँहेलो घामलाई रोगी देख्नु भ्रम हो ? म सोचाईहरुको भूमरीमा पस्न थालेँ । यस्तो पनि लाग्यो कि म यो रोगी घामदेखि भागेरै त आजसम्म आएको छु नत्र उहिल्यै मलाई यो रोगी घामले उम्कनै नसक्ने गरेर अँठ्याउंने थियो ।
हैन त्यस्तो नहुन पनि त सक्छ । मैले साँझको घामसँग आमनेसामने भएर भलाकुशारी गर्न थालेँ भने त्यो घामलाई म रोगी नदेख्न पनि त सक्छु । त्यहि पँहेलो घाम मलाई फेरी प्रिय लाग्न पनि त सक्छ । ओच्छ्यानमा पल्टिएको थिएँ म । पल्टि पल्टि मैले आफ्नो गाला मुसारें । हात पाखुरा छामें । लाग्यो म रोगी घामदेखि भागेको भाग्यै पो बरु रोगी भएँ कि? अवश्यै म उबेला फर्सीको मुन्टा केलाउँदै गरेकि उ जस्तै रोगी देखिएको छु होला । आजभोली सबैले मलाई दुब्लाएर झिट्टी भैसकिस भनेर दया पोख्छन् । मलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न मन भयो । आज यो कोठामा ऐना छैन । ऐनाको आवश्यकता नरहेपछि यो कोठाको ऐना हटाईसकिएको छ । मलाई उठेर ऐनासम्म पुग्ने जाँगर आएन तर सम्झिएँ कि यौटा सानो ऐना टेबल मुन्तिरको सन्दुकमा उसको सामानहरुसँग छ । सुतिसुति अलि लम्किएर मैले सन्दुकबाट ऐना निकालेँ । ऐनासँग यौटा सानो फोटो अल्बम पनि बाहिर निस्कियो । त्यसमा सबै उसका तस्विरहरु छन भन्ने थाहा थियो । सबै तस्विरहरु मैले पहिले सयौं पल्ट हेरेको पनि छु फेरिपनि मलाई ऐना हैन फोटो अल्बम नै हेर्न मन लाग्यो । पल्टाएँ उसको पहिलो तस्विरमा उसले मलाई छोडीसकेपछिको कुनैदिन मैले आफैंले लेखेको रहेछु ।
तँ छैनस् अब एक स्थलमा सर्वत्र ब्याप्त छेस्
देख्न दिमागमा र छुन दिलमा प्रयाप्त छेस् ।
अझै पनि दुख्छु म उ छैन भन्ने कुराले । यो दुई लाईन कविता लेख्दा कति दुख्दै लेखेँ होला ? त्यत्रो दुख्दा पनि उसलाई मैले यहि दिलमा छामेर सञ्चो भएँ कि ? फेरी दिलमा छामेर हेरेँ र सोचें कसरी आयो खै त्यत्रो ठुलो वियोगमा यत्रो आत्मज्ञान ? मलाई अल्बमको थप पाना पल्टाउन मन भएन । ऐना र अल्बम छोडेर म बाहिर निस्किएँ । उसैगरी आज पनि साँझ नै थियो । उसैगरी आजपनि पँहेलो घाम नै सर्वत्र पोखिएको थियो । मलाई यो घामलाई रोगी भन्न मन लागेन र यो पँहेलो घाम त्यति प्रिय पनि लागेन । यो पँहेलो घाम पहिले प्रिय लाग्नु त्यसपछि रोगी देख्नु सबै भ्रम रहेछन्, सबै सत्य रहेछन् । पहिले उ हुनु र अहिले उ नहुनु पनि भ्रम र सत्य दुबैकुरा रहेछन् । केहि पनि सत्य होईन रहेछ । केहि पनि भ्रम होइन रहेछ । मलाई आफु बराबरी सत्य र बराबरी भ्रमको माझमा उभिएको महसुस भयो र त्यहि माझैमाझ बरु सजिलो हिँड्ने बाटो भेटेको महसुस भयो ।
सबै प्रकारका कुलतहरुबाट टाढा बसेको थिएँ म तर आज मेरो खल्तिबाट मेरै हातहरुले चुरोट झिकेर ओठलाई च्याप्न अह्राए र सलाई कोरेर सल्काईदिए । म रोगी घामसँग अब देखि भाग्दिंन भन्ने अठोट गर्दै पँहेलो घाम अनुहारमा पारेर चुरोट फुक्न थालेँ बेफिक्री ।